Qormo Xikmad ah – dhugasho
maxamedsheekafguun Juunyo 29, 2020 waxbarasho
9. Dad qaarkii waxay garanayaan magacaaga keliya, ma oga qisadaada. Waxay arki karaan dhoolacadeyntaada keliya, ma oga xanuunkaaga. Waxay la yaabaan aamuskaaga, ma oga waxa maskaxdaada ku guuxaya. Waxay aqrin karaan qoraal aad soo qortay laakiin ma oga waqtiga aad ku lumisay!
10. Waxaa jira laba nooc oo Daal ah. Mid waa daal aad hurdo iyo nashasho u baahan tahay. Midna waa daal aad Nabad iyo Nolol u baahan tahay. Soomaalidu waxaa haya daal ay u baahan yihiin Nabad iyo Nolol.
Waxaa diyaariyay: Farah Cawaash Beeldaaje